Dalka Cuba, ayaa bilaysku ku dardar geliyaan ardayda Congolese oo dalbanaya bixinta deeqaha waxbarasho - TELES RELAY
ACCUEIL » WAXBARASHADA • International Dalka Cuba, ayaa bilaysku ku dardar geliyaan ardayda Congolese oo dalbanaya bixinta deeqaha waxbarasho
Iskudhacyada u dhaxeeya bilayska Cuban iyo ardayda caafimaadka ee Congo-Brazzaville ayaa ka dhacay Havana, Isniintii 8 April. Ardaydani waxay billaabeen dibad-bax dhacay dhammaadkii Maarso, iyaga oo dhalleeceeyay deeqda waxbarasho ee ay bixiso dawladda Congolese intii lagu jiray 27 bilood. Deeqdan la'aanta deeqaha waxbarasho, waxay sheegaan sida ay isku dayayaan inay naftooda u huraan, waddan hoos yimaada xayiraadda dhaqaale ilaa iyo 1962.
Ku saabsan ardayda 2 000 ee Congo-Brazzaville ayaa hadda ku jira Cuba. Inta badan waxay bartaan daawada ama electromedicine (anshax la xidhiidha isticmaalka korontada ee daawada), laakiin qaar waxay raacaan koorsooyin kale (agronomy, isgaadhsiin, iwm.).
Dhalinyaradaan waxay yimaadeen Cuba iyaga oo qayb ka ah a heshiis wada-shaqayneed oo ka dhexeeya labada waddan, saxiixay 2013. Heshiiskan ayaa sidoo kale u oggolaaday diritaanka Cuban badan oo ka shaqeeya qaybta caafimaadka ee Congo-Brazzaville.
Marka la eego, ardayda Congolese ee kuyaala Cuba waxay helayaan deeq waxbarasho oo ah 450 euros rubuc walba, oo ay bixiso Brazzaville.
"Wax badan ma aan sheegin, sababtoo ah way adagtahay in la soo daayo Cuba"
Gildas (magac kale), ardayga caafimaadka ee Congolese, ayaa ku yimid Havana 2016. Waxa uu ku rajo weynyahay in aan magaciisa la sheegin sababo ammaan dartood:
Markii ugu danbeysay ee aan helnay deeqdeena waxay ahayd Abriil 2018. Laakiin waxay ahayd sannadkii tan iyo markii aan wax taabtay. Guud ahaan, lama bixin intii lagu jiray bilihii 27. Taasi waa sababta aan u bilownay inaanu ka soo horjeedno dhamaadka bisha Maarso. Ilaa hadda, wax badan ma aan sheegin sababtoo ah way adagtahay in lagu soo daayo Cuba: maaha wax halkan ka jira ... [Mucaaradku waa ka mamnuuc jasiiradda, iyada oo marar dhif ah, Ed.]
Tan iyo bilawgii dhaqdhaqaaqooda, ardayda Congolese waxay dhowr jeer booqdeen safaaradda dalkooda si ay uga mudaharaadaan. Laakiin bilaysku lama kulmin isku duubnaantaas. Waxay sidoo kale go'aansadeen in ay joojiyaan socdaalka illaa illaa iyo inta ay waxbarashadooda la siiyay. Sida laga soo xigtay ardayda, safaaradda ayaa ku yaboohday in ay bixiso lix bilood oo deeq waxbarasho ah, oo lacag la'aan ahna indhahooda.
Dhaqdhaqaaqa mudaaharaadayaasha ah ee ardayda Congolese waxay bilaabeen dhammaadka March.
Ardaydu waxay diidaan in la bixiyo lix bishii ganacsiga kaliya.
"Boolisku waxay qaadeen qori"
Isniintii, April 8, dhaqdhaqaaqa mudaaharaadku wuxuu ahaa mid isbedel ah, sababtoo ah rabshad ayaa dhacday markii ugu horeysay dhismaha ardayga ee Salvador Allende, sida ay cadeeyeen Gildas (magac kale):
Bilayska Kuban ayaa goobta soo gaadhay ka dib markii uu ugu yeeray agaasimaha deegaanka. Waxay galeen gabadha, halkaas oo ay isku dayeen inay soo xiraan ardayda, sidaa daraadeed waxaa jiray iska hor imaad. Waqtigaas, waxaan ku jiray banaanka, laakiin waxaan arkay ardayda qaar ka jabay albaabka si ay uga soo baxaan diyaargarowga. Kadibna waxaan arkay booliska oo isticmaalaya gaaska dadka kaga ilmeeysiiya iyo uur qaadista eyda. Mid ka mid ah iyaga ayaa xitaa soo tuuray bistoolad. Kadibna xoojinta booliska ayaa yimid, sidaa daraadeed ardaydu way ka baxeen. Dhammaantani waxay ku dhammaadeen wax ka yar saacad.
Lundi 8 Abriil, eeyooyinka waxaa loo isticmaalaa ardayda.
Lundi 8 Bishii Abriil, ayaa boolisku waxa ay soo rideen bistoolad, taas oo cabsi gelisay ardayda. Fiidiyowga isla goobta, laga soo qaaday xagal kale, sidoo kale waa la arki karaa halkan.
Iskudhicii kale ee video Isniintii 8 April.
Toddoba iyo toban arday ayaa la xiray [tirooyinka ayaa ku kala duwan ilo, Ed.], Laakiin waxaa la sii daayay isla maalintaas. Qaar ka mid ah ayaa sidoo kale dhaawacmay: hal qof ayaa gacanta gacanta ka jabay, mid kale wuxuu lahaa jilib jabtay, qaar ayaa loo qaniinay eeyada waxaana lagu garaacay qoob-ka-cayaar ...
Hawlahaas, Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha waxay ku jawaabtay joornaalka rasmiga ah Granma :
Dhacdooyinka ayaa ahaa mid rabshad wata, kaas oo looga baahnaa in la dhexgalo hay'adaha sharci fulinta [...]. Wasaaradda Caafimaadka Bulshada, iyada oo ku celineysa sida ay uga go'antahay in ay tababaraan xirfadlayaal [...] laga bilaabo dalal kasta oo codsada, gaar ahaan qaarada Afrika, waxay ku celineysaa in falalka noocaas ah aan loo oggolaan doonin iyo in ku haboon ayaa la qaadi doonaa [...].
"Qaar ka mid ah ardayda Congolese waxay shaqeeyaan, xitaa haddii ay sharci darro tahay"
Gildas (calaamad magac) ayaa ka tarjumeysa cawaaqibta ku aadan bixinta deeqaha waxbarasho ee ardayda:
Shakhsi ahaan, waxaan nasiib u leeyahay in waalidku i soo diri karo lacag. Laakiin tani maahan kiiska. Sidaa daraadeed, deegaankayaga, qaar waxay iibiyaan rootiga, looska, miro, cunto la dubay ama dhar, si ay u helaan waxoogaa lacag ah. Qaarkood sidoo kale waxay maydhaan dharka ardada kale ama waxay sameeyaan jimicsi ... Laakiin waa sharci-darro: Cuba, ardayda ajnabigaa xaq uma laha inay shaqeeyaan.
Deganaanshaha, waxaan naloo siinay oo hoyannay. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aan u baxno - in aan tagno jaamacada ama isbitaalka - tusaale ahaan waa in aan iibsanaa cuntadeena iyo tikidhada basaska, taas oo dhibaato u ah kuwa aan haysan lacag. Tusaale ahaan, sannadka saddexaad ee daawada, waa inaan sameynaa saacadaha 120 ee daryeelka. Ilaaliyeyaashu waxay socdeen saacado 12. Maadaama aanay qaar ka mid noqon karin cuntooyinka maalintii, ma aha inay dhameeyaan, inay guriga u tagaan si ay u cunaan, taas oo ah dhibaato la xiriirta kooraska.
Wafdi ka socda Congolese ayaa la filayaa in ay ku kulmaan Cuba
Waxaa ka soo qaybgalay tifaftirayaasha Faransiiska Observers 24, Thierry Moungalla, oo ah afhayeenka xukuumadda Congolese, ayaa yiri:
Deeq-bixinta deeqdan waxbarasho ayaa walwal leh. Laakiin waxay ku xiran tahay xaaladda dhaqaale: ilaha dadweynuhu hadda uma baahna inay ku haboonaadaan dhammaan kharashyada. Waxaan ka nimid meelo kale iyagoo la hadlaya IMF ku saabsan. Sidaas awgeed ma jirto wax rabitaan ah oo ka socda qaybta dawladda in ay ardaydu ka baxdo dhibaatada inta ay ku suganyihiin dhinaca kale ee adduunka.
Wafdi ka socda Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Tacliinta Sare, iyo Saraakiisha Sare ee mas'uul ka ah arrimahaas, ayaa sidoo kale ku sii jeedda Cuba. Waxay la kulmi doontaa ardayda Cuban iyo masuuliyiinta si ay u helaan xal.
Ardaydu waxay la soo xiriireen tifaftireyaashayada waxay rajeynayaan in dhibaatooyinkooda la xallin doono dhamaadka kulankan, gaar ahaan marka ay ku kalsoon yihiin in imtixaanka Cuba uu yahay wax fiican, sida Gildas uu sharaxay ):
Halkan, macallimiintu waa kuwo karti leh oo waxaan xaq u leenahay deeq waxbarasho, aragti ahaan. Waxaan qabaa inay mar walba ka fiican tahay barashada Congo-Brazzaville ...
Dhinaca kale, marka laga reebo daraasadaha, xaaladaha nololeed maaha kuwo Cuba u fudud: waxaan nahay 12 qolalka, halkaas oo aad u kulul, taas oo aan ku habooneyn in dib loo eego. Intaa waxaa dheer, waxaynu cunnaa wax yar oo isku mid ah: bariiska cad, ukumo, iwm. Tan iyo markii aan imid halkan, waxaan cunay hilib lo hilaacay ... waa inaan sheegaa in waddanku yahay xayiraad...
Maqaalkan waxaa qoray Chloé Lauvergnier (@clauvergnier).